IBunkhouse Retreat kwiNtlango ePhezulu yeDewey Az!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGayle
Ikhabhathi yelog yokwenyani kwiinduli zaseDewey! Ibekwe phakathi kweepropathi zeehektare ezintlanu zamahashe! Amagumbi okulala ama-2 amakhulu (inkosi kunye nokumkanikazi) Imizuzu nje ukusuka ePrescott, indawo zokutyela, iivenkile, iGrand Canyon, iSedona, iJerome kunye neFlagstaff! Ikhitshi eligcweleyo! Ibhafu enye eneshawa enkulu! Indawo yomlilo evuthayo, umgodi ongasemva kwendlu, iyadi enkulu ebiyelwe yabucala (ilungele iintsana zakho ezinoboya) kunye ne-driveway, inabo bonke ubutofotofo bekhaya! Ngokufanelekileyo akukho maqela ngaphandle kwemvume yangaphambili! NGOKUPHELELEYO AKUTSHAYWA NGAPHAKATHI! Ifumaneka ngaphaya kohola we-169!
I-1000sq ft, amagumbi okulala ayi-2, i-Queen kunye ne-twin floor umatrasi, ndihlamba, ikhitshi epheleleyo, indawo ezimbini zokutya, ukuseta isihluzo se-Hepa esiphathwayo kwigumbi lokuhlala, igesi yangaphandle yeBBQ KUNYE NE-FIRE-PIT...itafile yekhadi kunye nezitulo ezine ezigcinwe enkosini. igumbi lokulala!
Nceda undinike inombolo yondwendwe echanekileyo ukuze sishiye isixa esilungileyo seetawuli!! OMKHULU iimbono ze-mts ngaphambili nangasemva....PETS WAMKELEKA..ucingo olukhuselekileyo lwesilwanyana olujikeleze yonke ipropathi!
Ibhedi enkulu eyi-1, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.98 out of 5 stars from 282 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-282
Downtown Prescott, 15 miles, Cottonwood, Jerome and Sedona 30-40 imizuzu kude...Flagstaff, 1 hr kude!!
Umbuki zindwendwe ngu- Gayle
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dewey-Humboldt